» बुद्ध लामा र केबिकाको अंक फेरि दोहोरिएला ?
बुद्ध लामा र केबिकाको अंक फेरि दोहोरिएला ?
२० कार्तिक २०७७, बिहीबार ०७:५८
मकवानपुर, २० कात्तिक । विश्व प्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा गायक बुद्ध लामा र कोरियोग्राफर केबिका खत्रीले पहिलो हप्ता देखि छैटौँ हप्तासम्म लगातार समान अंक प्राप्त गरिरहेका छन् । स्टेजमा बुद्धिका जोडीका रुपमा परिचित यो जोडीले आफुले पाउने अंक न त घटाएका छन् न त बढाएका नै छन् बरु एकै स्थानमा लगातार आफुलाई कायम गर्न सफल भएका छन् । उनीहरुले छैटौँ हप्तासम्म लगातार २६–२६ अंक प्राप्त गर्दै आएका छन् । छैटौँ हप्ता पार गर्दासम्म यो जोडीले ६ पटक नै २६ अंक प्राप्त गर्यो । लगातार एउटै अंक प्राप्त भएपछि यो जोडी कहिले हाँस्ने त कहिले भावुक हुने गरेका छन् । समान अंक प्राप्त गर्दैगर्दा नै ३ वटा ईलिमिनेशन विक पनि पार भईसकेको छ । उनीहरुले लगातार मेहनत गर्दै नृत्य प्रस्तुत गरेका कारण यो जोडी स्टेजमा पहिलाका तुलनामा दुब्लो पातलो देखिन थालेका छन् । अब सातौँ हप्ता पनि के उनीहरुले २६ अंक नै प्राप्त गर्लान् ? यतिखेर दर्शकहरुमाझ यो प्रश्न उठेको छ । हेर्नुहोस् यो भिडियो सामग्री–
लगातार २६ अंक पाएता पनि यो जोडीको समग्र अंक हेर्दा भने त्यति निराशाजनक देखिँदैन । बरु यो जोडी अन्य जोडीका तुलनामा केही बलियो पनि देखिएको छ । हालसम्म प्राप्त भएको अंक हेर्ने हो भने यो जोडी उत्कृष्ट ९ जोडीहरुमध्ये ४ जोडीभन्दा अगाडि छ । अर्थात उनीहरुले प्राप्त गरेको हालसम्मको जम्मा अंक १५६ लाई आधार मान्ने हो भने ४ जोडीहरु उनीहरुको तुलनामा पछि छन् । त्यस्तै गत साता प्राप्त भएको अंक अनुसार उनीहरु तेस्रो नम्बरमा छन् । गत साता उनीहरुले प्राप्त गरेको अंक अनुसार उनीहरु अन्य ७ जोडीहरुभन्दा अघि छन् । उनीहरुले गत साता प्राप्त गरेको २६ अंकले अन्य ७ जोडीहरुलाई पछि पार्न सफल भएको हो ।
प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरुको जोडीहरुमध्ये सर्वाधिक केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा बुद्ध र केबिकाको चर्चा छ । यो जोडी शोमा मात्र नभई शोबाहिर पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । उनीहरुको जोडीलाई दर्शकहरुले केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा मन पराएका छन् । उनीहरुले दिने हरेक अन्तरवार्ताहरु पनि यतिखेर चर्चामा छन् । धेरै जसो युट्यबरहरुले उनीहरुको प्रेमको प्रसंग कोट्याउने गरेका छन् । तर उनीहरु एक मिल्ने साथीका रुपमा शोमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उनीहरुले छैटौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १५६ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले पहिलो हप्ता फ्री स्टाईल, दोस्रो हप्ता तामाङ सेलो, तेस्रो हप्ता कन्टेम्प्ररी, चौथो हप्ता ओपन स्टाईल, पाँचौँ हप्ता हाउस र छैटौँ हप्ता ओपन स्टाईल डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले एक पटक बटम थ्रीको सामना गरेका छन् ।